Tsy misy azo atao - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Day-by-Day > Tsy misy zavatra tokony hatao
"Mandra-pahoviana ianao no te hiteny zavatra toy izany ary ny teny aloaky ny vavanao ho rivotra mahery" (Joba 8: 2)? Iray amin'ireo andro tsy fahita firy io rehefa tsy nikasa na inona na inona aho. Noho izany dia nieritreritra ny handamina ny boaty mailaka aho. Noho izany dia nihena ny isan'ny mailaka avy amin'ny 356, tsy ela dia lasa 123, saingy naneno ny finday avy eo; nametraka fanontaniana sarotra ny paroasy iray. Adiny iray taty aoriana dia tapitra ny resaka.
Manaraka aho dia te hanao ny fanasan-damba. Vantany vao teo amin'ny masinina fanasan-damba ny akanjo, dia naneno ny lakolosim-baravarana fa io no mpifanolobodirindrina akaiky. Antsasakadiny taty aoriana dia afaka nifindra teo amin'ny masinina fanasan-damba aho.
Nihevitra aho fa mety ho afaka mijery ilay finale billiard amin'ny fahitalavitra. Nahatsiaro ho nahazo aina aho teo amin'ny seza iray misy kaopy mafana misy dite mafana rehefa nipoaka ny telefaona. Tamin'ity indray mitoraka ity dia mpikambana iray nanontany momba ny fivoriana tamin'ny faran'ny herinandro. Nitsahatra niantso tsy ara-potoana mba ahafahako mijery ny famaranana amin'ny famaranana farany amin'ny fahitalavitra ary hisotro ny dite mangatsiaka.
Tokony hanao asa an-dahatsoratra ho an'ny iray amin'ireo zavatra vita an-tsoratra avy any ivelany isika. Androany no fotoana tokony hamaranana an-tsoratra ireo lahatsoratra. Nisy mailaka nilelaka tao anaty boaty ary nahatsapa aho fa hanokana fotoana hamaliana azy ireo avy hatrany.
Noon. Toy ny mahazatra dia mandray sandwich aho ary miverina amin'ilay lahatsoratra. Avy eo dia miantso ny fiantsoana iray, manana olana ny olona ao amin'ny fianakaviana. Mijanona tsy miasa aho mba hahitana hoe ahoana no ahafahako manampy. Miverina amin'ny misasakalina aho ary "matory hatrany".
Mianara amiko marina, tsy mitaraina aho. Nefa tsapako fa tsy mbola nisy andro toy izao Andriamanitra ary andro iray miavaka ho ahy izany. Tsy manaitra ny olana na ny vavaka ataontsika Andriamanitra. Manana ny fotoana rehetra Izy mandrakizay. Afaka tonga hihaona amintsika mandra-pahoviana isika te hivavaka. Tsy mila mifantoka amin'ny fandaharam-potoana izy mba hahafahany mikarakara ny raharaha isan'andro na misakafo. Afaka manokana antsika tanteraka izy ary mihaino ny zanany lahy, ilay mpisoronabe izay mitondra ny ahiahintsika aminy. Zava-dehibe ho azy isika.
Na eo aza izany dia tsy manam-potoana ho an'Andriamanitra isika, indrindra amin'ny andro manahirana. Indraindray kosa matetika dia mieritreritra isika fa mila manao asa maika ho toeram-boninahitra eo amin'ny fiainantsika. Dia afaka mijery fotsiny Andriamanitra raha manana minitra na latsaka kely kokoa isika. Na rehefa mijaly isika. Oh amin'izay, manana fotoana be ho an'Andriamanitra isika rehefa sahirana!
Indraindray aho heveriko fa kristiana dia mampiseho fankahalana bebe kokoa an'Andriamanitra noho ireo tsy mino an'Andriamanitra izay tsy milaza fa manaja sy manaraka Azy!
Ry ray mamindra fo, mamindra fo aminay amin'ny toe-javatra rehetra sy amin'ny fotoana rehetra. Mba ampio izahay hahay hisaotra sy handray am-potoana hatrany. Mivavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amena
Nataon'i John Stettaford